Xarunta Cibiltepe Ski Center ayaa isku diyaarineysa xilli ciyaareedka cusub | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari36 KarsXarunta Xarunta Dhexe ee Xarunta Dhexe ee Saab
14 / 10 / 2014 36 Kars, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, TELPHER
Cibiltepe Ski Center ayaa isku diyaarinaya xilli ciyaareedka cusub sii diyaar garoobayo ski jiilaalka miciinka in Sarikamis Cibiltepe taas oo ah mid ka mid ah jiga waaweyn Turkey ee ski.
Cibaattepe, oo ah mid ka mid ah xarumaha barafka ee jimciyadaha iyo shisheeye ee ajnabiga ah ee leh tayada barafka, baraf dhaadheer iyo ammaan ah oo udhexeeya geedaha qulqulaya, waxay xoojiyeen shaqooyinka ka hor xilliga qaboobaha.
Guddoomiyaha Degmada Sarikamış Muhammed Gureel, AA ayaa sidaas yidhi, ka hor xilliga qaboobaha ee xilliga qaboobaha, gaar ahaan aagga isgoysyada, waxay bilaabeen shaqo xoogan oo ballaaran, ayuu yidhi.
Xaqiijinta in suurtagal ay sii kordhin doonto tas-hiilaadka hoyga ee adeegga xilli ciyaareedkan ee xarumaha hudheellada iyo xarumaha magaalada, Gürbüz ayaa sheegay, unda Xiliga xilliga qaboobaha, waxaan ka shaqeyneynaa dhamaan wadooyinka bartamaheena kayaga si ay u galaan dalxiisayaal badan iyo si loo siiyo barafka xilli dheer. Waxaan fursad u heleynaa in aan barafo sida ugu dhakhsaha badan markii ay daaqaan marka aan soo qaadno xagasha foomka roogga. "
Garsooraha Guud ee Maamulka Gobolka ee Gobolka iyo Sarikamis 3, 2 iyo 6 buuxa, shaqeynta iyo nadiifinta hawsha wadada ee Gürbüz, gaar ahaan 1 iyo 5 dhibaatooyinka khibrada leh.
Gurbüz waxay sheegtay in ay sameysteen cabirka 1 oo buuxa qeybta dhexe ee wadiiqada wadada 1 waxayna tiri, "Tirada durbaanka 5, waxaan ka qaadaynaa dhagaxyada waaweyn ee ka baxa jidka isla markaana waxaan ku qiyaasnaa ardaydeena. Si kale haddii loo dhigo, dhammaan cayaaraha xaafadda iyo kuwa ajnabiga ah ee yimaada xarunteena barafka xilliga qaboobaha xilliga jiilaalka waxay kuxiran yihiin kalsooni iyo farxad. Intaa waxaa dheer, in adeegga cusub ee 700-kursiga cusub loo adeegi doono wareegga koowaad ee hoteelka. Waxaanu abaabulnay dhammaan qalabkeenna tan oo shaqaduna sii socon doonto iyadoon hoos u dhigin.
Xarunta Cibiltepe Ski ayaa loo adeegi doonaa xilli ciyaareedkan 25 slalom iyo 8 baraf dushooda leh dhererka 1 kilomitir iyo 2 qalabka kombiyuutarada ee awood u leh inay qaadaan 4 kun qof saacaddiiba.
Metrobus cufka ayaa xiran agagaarka sare (Video)